Ataovy madio hatrany ny atiny! Anisan'izany ny fanamarihana | Martech Zone
Alahady, May 11, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mbola tsy nanao fampitahana 'lohan-doha' ny lahatsoratra bilaogy nosoratana tamina daty iray ary iray tsy nisy daty aseho. Over at DoshDosh, Tsikaritro fa manana daty amin'ny fanehoan-kevitra izy ireo, fa ny daty dia tsy misy hahitana azy ao amin'ilay lahatsoratra mihitsy. Mino aho fa fomba tsara kokoa io noho ny bilaogiko, izay ahitako ny daty hita miharihary na amin'ny URL na miaraka amin'ny sary misy daty. Tsy afaka mamerina ny famantaranandro fotsiny aho izao raha tsy manao asa be!
Haingam-pandeha haingana ny fandraharahana sy ny teknolojia hany ka mety tsy ho azo ampiharina intsony ankehitriny ny lahatsoratra bilaogy iray taona iray. Raha mahita lahatsoratra bilaogy vitsivitsy amin'ny lohahevitra iray aho dia matetika no mifidy ny daty vaovao indrindra ao anaty fonosana ary tsy miraharaha ireo hafa.
Pejy fanavaozana sy milina fikarohana
Azo antoka fa misy maro hafa izay manao an'io koa, izay inoako fa porofon'ny valin'ny fikarohana. Mikaroha Google Blogsearch ary ny valiny dia voalahatra araka ny filaharany. Na dia ao amin'ny Google aza dia matetika no tsikaritro fa ny lahatsoratra vaovao dia manakaiky ny tampon'ny valiny. Tsikaritro ihany koa ireo bilaogera hafa izay matetika 'mamoaka indray ny atiny - lahatsoratra 2 saika nitovy nefa iray navoaka vao tsy ela akory izay. Na dia mitovy aza ny atiny, miseho eo akaikin'ny tampony ilay lahatsoratra vaovao!
Pejy fanavaozana noho ny fanehoan-kevitra
Tsy azoko inoana fa kisendrasendra fotsiny ny lahatsoratro malaza indrindra amin'ny bilaogiko dia ireo izay manana endrika fanehoan-kevitra tsy miova. Ny atiny namorona ny mpampiasa, toy ny fanehoan-kevitra, dia 'mamelombelona' lahatsoratra iray amin'ny alàlan'ny fanovana ny atiny izay reindex ny motera fikarohana. Raha fintinina dia mitazona ny atiny ho 'vaovao' ho an'ny mpamaky sy ny motera fikarohana.
Ny serivisy manome hevitra dia mamono ny freshness anao
Misy ihany a Buzz on ny vitsy fanehoan-kevitra tolotra avy on ny tsena izay manao tena an fiantraikany. Ny fahazoana ireo teknolojia ireo dia zava-dehibe ihany!
Ny olana dia ny Search Bot, ny motera programmatic an'ny motera fikarohana, tsy browser! Ny Bot fitadiavana dia hanao ny fangatahana (D) ho an'ny pejinao ary eo no hijanonany. Na inona na inona atiny lehibe na atiny vaovao ampiana amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra, tsy fantatra ny Search Engine satria tsy mangataka an'io fampahalalana io mihitsy izy. Matimaty ny pejinao ary hadino.
Ireo serivisy ireo dia matanjaka sy mahafinaritra amin'ny fampiasana azy, noho izany tsy mandondona azy ireo tanteraka aho. Izaho manokana dia tsy mino tsotra izao fa ny fiasa amin'ireo rafitra ireo dia mihoatra ny tombotsoan'ny atiny ateraky ny mpampiasa sy ny fanatsarana ny motera fikarohana. Ny vahaolana dia ny fampiroboroboana ny sehatr'asa Application Programming Interfaces ho an'ireo serivisy ireo (F). Amin'ity fomba ity, ny mpizara tranonkala ahy dia mbola afaka mampiseho ny hevitra ho an'ny motera mpampiasa OR na ny tranokalako dia handray soa amin'izany.
Amin'ireto serivisy vitsivitsy ireto dia efa eny an-tsena, tsy maintsy manontany tena ianao hoe:
ahoana no hifehezana sy hitantanana ny feo of ny atiny izay izy ireo ihany va izy?
Raha miala amin'ny asany izy ireo, ahoana no hahitanao izany vaovao izany? Raha manapa-kevitra ny hiala amin'ny serivisin'izy ireo ianao, ahoana no hamerenanao izany atiny izany? Mety ho lasa ratsy tarehy!
Izaho dia rindrambaiko amin'ny maha-matihanina amin'ny serivisy ahy, noho izany mino ny tombotsoan'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo toa izao aho amin'ny fitantanana ny fomba mahomby kokoa. Amin'ity tranga ity, te-hahazo antoka aho fa mahazo tombony feno amin'ny fanehoan-kevitra natao tao amin'ny bilaogiko, na izany aza! Raha mandeha eo amin'ny lafiny mpizara izy ireo, dia mety hanome hevitra kely fotsiny aho, fa mandra-pahatongan'izany dia mazava ny familiako.
Tags: fanehoan-kevitravaovaoatiny vaovao
May 12, 2008 amin'ny 12: 49 AM
Wow, tsy nanana ny hevitro fantatro fa mahasoa izany ivelan'ny fampahalalana (indraindray). Misaotra nandefa ity fampahalalana ity Doug!
May 12, 2008 amin'ny 3: 24 AM
efa nijerijery an'i SezWho ianao?
Manome fampiasa fanampiny izahay momba ny atiny ateraky ny mpampiasa, na izany aza dia ampitomboinay ny rafitra fanehoan-kevitra misy anao - tsy soloinay izany. Te-hahazo ny hevitrao…
May 12, 2008 amin'ny 8: 02 AM
Tena homeko endrika faharoa ny serivisinao. Azonao atao ny manavaka ny serivisinao amin'ny hafa! Heveriko fa maro ny olona mieritreritra fa mitovy amin'ny ambiny ihany ianareo.
May 12, 2008 amin'ny 3: 48 AM
Lahatsoratra mampieritreritra be io. Heveriko fa tsy misy dikany lehibe ny tsy fananako ny daty amin'ilay lahatsoratra, ka ny tenako ihany no nampihariko. Tsy dia sarotra ny manao izany - mila manavao ny single.php fotsiny ianao ary manaisotra ireo referansa php amin'ilay daty.
Mikasika ireo serivisy manome hevitra, tsy mba nieritreritra azy ireo mihitsy aho. Manana lavanila tsotra tsotra fotsiny aho maneho hevitra ao amin'ny tranokalako. Tsy maintsy mieritreritra an'izany koa aho.
May 12, 2008 ao amin'ny 5: 11 PM
Tena milaza ve ianao fa tsy maninona ny manala ireo daty (ary irinao ny hanana izany) satria ny fananana daty dia manambara ny taonan'ny lahatsoratra taloha?
Ka raha manadino ny daty lany daty amin'ny ronono boaty aho, tsy manimba ve izany?
Avelao irery ireo daty (tsara tarehy ihany ny endrik'izy ireo eto)… ary aleo tsy ampirisihintsika ny hafa hanaraka io fanao tena ratsy io. Ratsy ho an'ireo mpampiasa izany ary amin'ny farany ireo izay manao izany dia hatsipy anaty jiro ratsy.
Fanamarihana ho an'ireo bilaogera nahavita hatreto: Raha te hitohy ny fivezivezena amin'ny bilaoginao ianao dia manorata atiny mahafinaritra be foana. Aza miantehitra aminao mpampiasa mba haharitra ny fivezivezenao… ish.
Manodidina ny vibe mampatahotra mitranga eto, Doug. 🙁
May 12, 2008 ao amin'ny 5: 47 PM
Napetrakao izany fihodinan-dratsy izany. Tsy midika velively ny hiteny hoe tsy marina. Doshdosh dia tranokala mahafinaritra misy atiny mahafinaritra, na vaovao na taloha! Mino aho fa ny lahatsoratr'izy ireo 'tsy misy daty' dia mamela azy ireo hijanona elaela kokoa.
Raha manoratra lahatsoratra amin'ny raikipohy Excel aho ary lahatsoratra mahafinaritra izany, ny olana dia mahita ny lahatsoratra 'vaovao' ny Search Engine ary avy eo manosika ahy. Mitsidika ny tranokalako ny olona ary mahita fa herintaona izao ary mitady zavatra vaovao kokoa izy ireo - na dia mety ho tsara kokoa aza ny atiny.
Izany no antony, raha mandinika ny sasany amin'ireo bilaogera ambony ianao (mampiasa daty), dia mirona hamerina hatrany hatrany ny atiny. Ny atiny vaovao dia mitazona ny fifamoivoizana amin'ny motera fikarohana - izay ahafahanao mampitombo ny mpamaky anao.
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, hanjakan'ny atiny lehibe foana. Marihiko fotsiny izao fa mety hampidi-doza ianao amin'ny alàlan'ny 'lany andro' atiny izay mbola mendrika ny hojerena!
Hevitra tsara, Matt!
May 13, 2008 amin'ny 9: 45 AM
lol @ fihodinan'ny ratsy. Zavatra iray tsara izay [ratsy?] Nataoko: mahita ny ratsy indrindra amin'ny zava-drehetra. (Amin'ny orinasa mametraka fahaiza-manao sarobidy io, manalavitra ny PR ratsy… miala tsiny indrindra… mampiofana ny tenako aho mba hahita ny maharatsy ary ampirisihina isan'andro hitady ny zoro ratsy indrindra… ka izany no tadiaviko.)
Tsy noheveriko ho toy ny lahatsoratra vaovao ireo bilaogera manavao ny atiny taloha ho famoahana azy ho vaovao. Mazava ho azy fa ho hitako izy ireo mandrehitra jiro mitovy aminy. (Mety hazavana ratsy kokoa noho izany, na dia… satria tsy hita miharihary ny aloky ny fanao.)
Ho valin'ny ohatra Excel Formula… Raha nametraka rafitra fanehoan-kevitra avy amin'ny antoko faha-3 ilay bilaogera ary nametraka ireo daty nilamina ary naniry ny hijanonan'ny lahatsoratra ho "vaovao" dia manome soso-kevitra hanavao ny vatan'ilay lahatsoratra isaky ny 3-6 volana aho. Manampy zavatra toy ny “Fanavaozana: * Joe Schmo * dia tonga niaraka amina fomban-tsolika 2 * hafa amin'ny fikajiana trosa *.” (Izay misy ifandraisany amin'izany ny lahatsoratra amin'ny asterisk.) Izany dia hanome ny pejinao "fihenam-bidy" ao anaty motera fikarohana ary koa hanome rohy fanampiny ho an'ireo bilaogera hafa (izay mety hamaly amin'ny famoronana tambajotra midadasika kokoa izay mifandimby mitarika votoaty / hevitra vaovao… fandresena-fandresena toy izany. Mandresy ianao, mandresy ny mpamakinao, ary mandresy ny bilaogera namanao. Saika handeha hiteny aho hoe tena tsara ho an'ny rehetra izany fomba izany ka mahatonga ny zavatra hafa. fanao ratsy. Fanao ratsy izy ireo tsy satria tototry ny fikasana ratsy (toy ny famerenam-bidy ny votoaty), fa satria misy safidy izay mahasoa kokoa ny rehetra.)
Misaotra ny fanamarihana fanaraha-maso. Hisoratana anarana amin'ny sakafonao aho izao. 🙂
(PS Tsy tokony ho mifantina… fa misy Uber-peeve hafa ananako izay namboarin'ny antoko rafitra faha-3: Ny fanehoan-kevitro teo aloha dia misy ad-Text-ad ao aminy. Amin'ny maha mpanoratra ny fanehoan-kevitra ahy dia manelingelina ahy ny mahita ny hevitro navadika ho doka. Satria ny zavatra toa ny Disqus dia tsy ampidirina ao anaty atin'ny pejy mandritra ny fangatahana voalohany ho an'ny mpizara dia tsy "navadika" ireo plug-in-doka-ad-doka ireo. hehehe. Tsy hivoaka aho ity dia tsy voa aho, izaho. hidina amin'ny tantara ao amin'ny douglasskarr.com aho ho toy ny troll / mpitaraina. lol.)
May 13, 2008 amin'ny 10: 15 AM
Mba hilamina fotsiny - doka Kontera izany fa tsy doka Text Link. 🙂 'azo antoka ny motera fikarohana' i Kontera. Sora mainty ny doka Text Link.
Tsy nieritreritra ny hitazona ireo fanehoan-kevitra ivelan'ny fetra ho an'ny doka Kontera aho, saingy tiako izany hevitra izany. Hataoko eto izany afaka iray minitra!
Mar 1, 2012 amin'ny 3: 04 AM
ny atiny dia alao antoka fa misy laharana pejy avo kokoa, raha misy mahasoa sy ilaina ny tranokala
vaovao. Ny mpamaky maro sy tsy manam-paharoa dia ho liana amin'ny tranonkalanao ihany koa.